Andro Iraisam-pirenena Ho An’ny Sakafo: Ny Fiainana Anaty Hanoanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2011 17:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Svenska, Deutsch, বাংলা, Español, Ελληνικά, македонски, Français, English
Vehivavy mivarotra sakafo Zo sasany voaaro, sary avy amin'i #Eelco
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny lahatsary avy any India dia nitety fiaraha-monina mba hanolotra anao ny Tetikasa Lahatsarin'ny Hanoanana, mifantoka amin'ny hoe na eo aza ny fivoaran'ny toekarena dia mbola misy ihany ny olona mandry fotsy any amin'ny fireneny.
Ireo lahatsary ireo dia novokarina ho an'ny Tati-baovao Momba ny Loza Maneran-tany 2011, fiaraha-miasa eo amin'ny Laminasa momba ny Sakafo Maneran-tany, ny Fikambanana ho an'ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO) an'ny Firenena Mikambana, ary ny IFederasion Iraisam-pirenena ho an'ny Vokovoko Mena sy ireo Orinasa Ilam-bolana Mena (IFRC.) Izany tatitra izany dia mikendry ny hamaliana ilay fanontaniana goavana hoe: “Nahoana ireo olona iray lavitrisa maneran-tany no mandry fotsy isan-kalina nefa mamokatra sakafo ampy ho an'ny rehetra izao tontolo izao?”
Ny tena manohina ao amin'ireo lahatsary 12 ireo dia noho izy ireo nataon'ny olona avy amin'ireo fiaraha-monina voakasik'izany, fa tsy avy any ivelany. Ny mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny lahatsary dia laminasa iray ho an'ireo olona avy amin'ny fiaraha-monina tsy dia omen-danja loatra, izay mianatra manao vaovao, mijery izany, manao hetsika ary mitady vahaolana ho an'ireo olana sedrainy sy ny manodidina azy.
Ao amin'ny vohikalan'ny tetikasa, hita ao daholo ireo lahatsary 12 miaraka amin'ny filazalazàna fohy momba ny fiaraha-monina nakàna izany. Ity lahatsary ity ohatra dia nalaina tany Silchar,Assam any Avaratra Atsinanan'i India, distrika ambanivohitra mpanao fambolena – miaraka amin'ny fiaraha-monina kely tsy dia faheno. Ao anatin'izany dia misy raim-pianakaviana iray mitantara ny hasarotana sy ny tsy fahafaha-manoatra na dia fantany aza fa mandry fotsy ny zanany.
Any Raj Nandgaon, distrika tsy mivoatra ary mifototra amin'ny fambolena any Chhatisgarh dia misy vehivavy voatery mivaro-tena mba ahafahany mamelona ny zanany.﻿﻿﻿﻿﻿
Niatrika zaza tsy ampy sakafo ny Medecins Sans Frontieres nandritra ny asa an-taonany maro tany amin'ny faritra samihafa maneran-tany, ary voamariky ry zareo fa vao maika manasaro-javatra ilay noheverina ho fanampiana: tsy nanome sakafo ahafahana mamelona zaza latsaky ny roa taona ireo fikambanana malala-tanana nanome sakafo. Ka amin'ny fanentanana Noana fifantohantsaina, nanapa-kevitra ry zareo ny hangataka ireo mpampiasa vola amin'ny Rafitra Fanampiana Ara-tsakafo mba tsy handefa sakafo ratsy kalitao intsony fa sakafo manome otrikaina ho an'ireo zaza tsy ampy sakafo.
Ny lohahevitra amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Sakafo amin'ity taona ity dia ny “Vidin-tsakafo, miala amin'ny krizy ho any amin'ny filaminana. Ity doka ity dia ho an'ny Lalaon'ny Hanoanana, sarimihetsika 15 minitra nataon'i Félix Álvarez Torres avy any Pero, izay hilazàny fa lalaovina tahaka ny vola filoka amin'ny lalaon'adim-pahefana ny vidin-tsakafo.
Nandritra ny folo taona farany teo dia niakatra avo dia avo ny vidin-tsakafo maneran-tany. Mampiasa vola an-davitrisa dollar maro ireo orinasa iraisam-pirenan hividianana ireo vokatra vao hiakatra, izay mahatonga fiakaran'ny vidin'entana sy tsy fahampiana amin'izao fotoana izao. Mitombo ny lokaloka amin'ny vidin-tsakafo: lalao andresenao foana.
Ivelan'ny latabatra filalaovana poker dia tsy maintsy manala trosa any amin'ireo mpilalao nitarika tamin'ny Lalaon'ny Hanoanana ireo mahantra. [sic]
Androany dia maro ny olona hamoaka amin'ny aterineto ny momba ny sakafo sy ny olana ara-tsakafo, amin'ny alalan'ny tetikasa Andro Fitoraham-blaogy, amin'ny tenifototra #BAD11 #food amin'ny vohikala fitoraham-blaogy. Mandraisa anjara amin'ny adihevitra dia lazao an'izao tontolo izao izay hevitrao momba ny fiakaran'ny vidin-tsakafo sy ny hanoanana.